Guddiga Dastuurka Baarlamaanka: Dad badan ayaa qaba iney Dowladdu xilka hayso 5 sano – Kalfadhi
Guddiga Dastuurka Baarlamaanka: Dad badan ayaa qaba iney Dowladdu xilka hayso 5 sano
Guddiga Dastuurka ee Baarlamanka Federaalka Soomaaliya ayaa sameynaya codeyn uu ku qabanayo boggiisa Feysbuugga, isaga oo dadka isu barbar-dhigaya in ay kala doortaan in Laamaha Fulinta iyo Sharci-dejinta ee Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ay xilka hayaan afar sano ama shan sano.
Sababta uu guddigu codeyntaas u sameynayo waxa uu ku sheegay in ay dadka qaar qabaan in waqtiga ay laamahaas xilka hayaan hadda, oo afar sano ah, ay aad u yar tahay, loona baahan yahay in intaas laga badiyo. “Dadka qaar ayaa qaba in waqtigan yar yahay, loona baahan yahay in la gaarsiiyo shan sano, si fursad fiican oo wax lagu qabto loo helo” ayaa lagu yiri dhigaalka guddiga.
Lix kun ka badan ayaa ilaa iyo hadda ka qeyb-gashay codeyntaas, waxaana ka faalootay dad kor u dhaafaya laba boqol oo qof, waxaana dadka codeeyey ay ilaa iyo hadda 64% ka mid ah doonayaan in waqtiga ay Fulinta iyo Sharci-dejintu xilka haynayaan lagu daro hal sano, halka 36% ka mid ah ay u codeeyeen inuu waqtiga laamahaas ahaado sida uu hadda yahay.
Codeyntan, oo soo bilaabatay maalin ka hor, socon doontana ilaa Khamiista soo socota, waxaa suuragal ah inuu isbedel ku dhici karo markasta, maadaama ay wali dad badan oo kale u haystaan fursad iney codeeyaan, waxaana uu guddigu uga gol leeyahay inuu u kaashado go’aanadiisa dib-u-eegista Dastuurka Ku-meel-gaarka ah.
Dhigaalka Guddiga Dastuurka Baarlamaanka ugu sameynayo codeynta
Xildhibaan Jeesow oo ciidan uu ugu yeeray Macaawiisleey ku bogaadiyey dagaal ay la galeen Al-Shabaab